Ny teny hoe Elohim (na Elôhima, raha gasîna) dia teny ampiasaina ho anaran-tsamirery iantsoana an' Andriamanitra ao amin' ny Baiboly hebreo (Tanakh) nefa ampiasaina koa ho anarana iombonana amin' ny endriny milaza maro izy ka midika hoe "andriamanitra maro". Io endrika milaza maron' ilay anarana io dia miteraka adihevitra momba ny isan' ny andriamanitra nivavahan' ny Hebreo, na tokana na maro. Ny Jiosy sy ny Kristiana izay mivavaka amin' Andriamanitra tokana dia mampisa sy mandika io anarana io hoe "Andriamanitra" (tokana) nefa samy manana ny fivoasany ny endrika milaza maro izy ireo ka isan' izany ny filazana ny herin' Andriamanitra.
1.1 Ampiasaina miaraka amin' ny matoanteny milaza maro
1.2 Ampiasaina miaraka amin' ny matoanteny milaza tokana
1.3 Anjely sy mpitsara
1.4 Ny tohatr' i Jakoba "nisehoan' andriamanitra" (maro)
1.5 Ny Filan-kevitra tao an-danitra
1.6 Zanak' Andriamanitra
2 Ny Elôhista
3 Ny olana apetraky ny endrika milaza maro
3.1 Fivoasana ara-kaifiteny
3.2 Fivoasana ara-teôlôjia
3.2.2 Fivoasan' i Thomas Römer
3.2.3 Filazana ny fahamboniana
4 Ao amin' ny Olomasin' ny Andro Farany
5 Ao amin' ny raelisma
Fampiasana ilay anaranaHanova
Ny hoe Elohim dia miseho matetika amin' ny Torah. Amin' ny toe-javatra sasany (oh: Eksodosy 3:4, "... dia niantso azy tao afovoan' ny roimemy i/ny Elohim ..."), miasa toy ny anarana amin' ny endrika milaza tokana izy amin' ny fitsipi-pitenenana hebreo, ary avy eo dia takatra amin' ny ankapobeny fa manondro ilay Andriamanitra tokan' i Israely io teny io. Amin' ny toe-javatra hafa, ny teny hoe Elohim dia miasa amin' ny maha endrika milaza maron' ny hoe Eloah azy, ary manondro ny pôliteisma izay fiheverana andriamanitra maro (ohatra ny Eksodosy 20:3 hoe “Tsy hanana andriamani-kafa eo anatrehako hianao.).
Miseho in-2 500 mahery ao amin’ ny Baiboly hebreo ny teny hoe Elohim, ary misy dikany
manomboka amin’ ny hoe “andriamanitra (maro)” amin’ ny heviny ankapobeny (toy ny ao amin’ ny Eksodosy 12:12, izay ilazana ireo “andriamanitr’ i Ejipta”),
ka hatramin’ ireo andriamanitra manokana (ny filazana matetika an’ i Yahweh ho "Elohim" an’ i Israely),
ny demony, ny serafima, ny zavamananaina mihoatra ny natoraly hafa,
ny fanahin’ ny maty izay navoaka araka ny baikon’ i Saoly mpanjaka ao amin’ ny 1Samoela 28:13,
ny mpanjaka sy ny mpaminany koa aza (ohatra, Eksodosy 4:16).
Ny andian-teny hoe bene elohim, adika hoe "zanak' ireo andriamanitra", dia mitovy amin' ny hita ao amin' ny lahatsoratra ogaritika sy fenisiana, manondro ny filankevitry ny andriamanitra.
Ny Elohim dia manana ny laharana fahafito amin' ny folo ao amin' ny ambaratongan' ny anjely araka ny jodaisma, araka ilay raby tamin' ny Andro Antenatenany, Maimônida. Hoy i Maimônida: "Tsy maintsy matoky aho fa ny Hebreo rehetra [ankehitriny] dia mahafantatra fa ny teny hoe Elohim dia teny mitovy endrika, ary manondro an' Andriamanitra, ny anjely, ny mpitsara, ary ny mpanapaka ny tany, ..."
Ampiasaina miaraka amin' ny matoanteny milaza maroHanova
Ny hoe Elohim dia endrika lava mifototra amin' ny fototeny semitika 'ēl izay midika hoe "andriamanitra" (tokana). Azo ampifanakekezina amin' ny teny akadiana hoe ilu  sy ny teny arameana hoe elah ary ny teny arabo hoe ilāh izy io. Ara-pitsipiteny, ny teny hoe elohim dia amin' ny famantaran' ny endrika milaza maro -îm. Ao amin' ny Baiboly dia maro ireo andalana ahitana ny teny hoe elohim izay manodro andriamanitra maro tokoa (Eksodosy 12.12). Mety hialohavan' ny mpanoritra izy ka azo adika hoe "ireo andriamanitra" (Eks. 18.11) sady mety hiaraka amin' ny matoanteny amin' ny endrika milaza maro (Salamo 97.7) na mpamari-toetra amin' ny endrika milaza maro.
Ao amin’ ny 1Samoela 28:13, elohim dia ampiasaina miaraka amin’ ny matoanteny milaza maro. Nilaza tamin’ i Saoly ilay vehivavy mpamoha angatra tao Endôra (Andôra) fa nahita elohim niakatra (olim / עֹלִים, matoanteny milaza maro) avy amin’ ny tany izy.
Ao amin’ ny Genesisy 20:13, dia nilaza i Abrahama, teo anatrehan’ i Abimeleka, mpanjaka filistina mpivavaka amin' andriamanitra maro, nanao hoe fa "(Ny/i) Elohim no nampirenireny ahy" (התעו, matoanteny milaza maro). Ny Baiboly amin' ny teny grika Septoajinta (LXX) dia mampiasa matoanteny amin' ny endrika milaza tokana (ἐξήγαγε(ν), aôrista II). Ny Baiboly amin' ny teny malagasy dia tsy manavaka ny tokana sy ny maro.
Ampiasaina miaraka amin' ny matoanteny milaza tokanaHanova
Azo anondroana andriamanitra tokana koa ny teny hoe elohim ka tsy ny andriamanitra tokan' i Israely ihany fa ny andriamanitra hafa koa toy ny andriamanitra Kemôsy izay elôhiman' i Moaba sy Astarte elôhiman' ny Sidôniana (Mpitsara 11.24; 2Mpanjaka 1.2-3; 1Mpanja. 11.5; 1Mpanj. 11.33). Ampiasaina koa io teny io hilazana ny zava-mananaina ara-panahy na andriamanitra kely toy ny matoatoa (1Samoela 28.13; Zakaria 12.8).
Anjely sy mpitsaraHanova
Amin’ ny toe-javatra vitsivitsy ao amin’ ny Septoajinta (LXX), dia nadika hoe angeloi (“anjely”) na hoe kriterion tou Theou (“ny fitsaran’ Andriamanitra”) ny hoe elohim hebreo misy matoanteny milaza maro, na misy teny manodidina mitaky filaza maro. Ireo andinin-teny ireo avy eo dia niditra voalohany tao amin’ ny Volgata latina ka nadika hoe "anjely" sy “mpitsara”.
Nametra-panontaniana i Gesenius sy Ernst Wilhelm Hengstenberg ny amin’ ny maha-azo itokiana ny fandikan-tenin’ ny Septoajinta momba izany. Notanisain' i Gesenius ny dikany nefa tsy niombon-kevitra amin' izany izy. Nilaza i Hengstenberg fa tsy mampiasa elohim mihitsy ny Baiboly hebreo mba hilazana “anjely”, fa nolavin’ ny mpandika teny ao amin’ ny Septoaginta ny fanondroana ny “andriamanitra” ao amin’ ireo andininy nanovany ny hoe “anjely”.
Manao tonon-tsiahy ny Salamo 8:4–6 ao amin’ ny Hebreo 2:6b-8a ny Testamenta Vaovao grika, izay ahitana ny hoe ἀγγέλους ("anjely") ao amin’ ny and. 7, ao amin’ ny Salamo 8:5 (8:6 ao amin' ny Septoaginta), izay misy ny hoe ἀγγέλους koa ao amin' ny dikan-tenin' ny Septoajinta.
Ny tohatr' i Jakoba "nisehoan' andriamanitra" (maro)Hanova
Ao amin' ireto andininy manaraka ireto dia nadika hoe "Andriamanitra" (tokana) ny hoe Elohim na dia nampiarahina tamin' ny matoanteny milaza maro aza izy io.
"Dia nanorina otely teo izy, ka nataony hoe El-Betela ny anaran' io tany io, satria teo no nisehoan' Andriamanitra taminy, fony izy nandositra teo anoloan' ny rahalahiny." (Jenezy 35:7)
Ny Filan-kevitra tao an-danitraHanova
1Fihirana nataon' i Asafa.
Eo amin' ny fiangonan' ny Tsitoha. Andriamanitra;
namoaka ny teniny eo afovoan' ireo andriamanitra izy:
2Mandra-pahoviana no hanaovanareo fitsarana tsy marina? - Selà .
3Omeo ny rariny ny mahantra sy ny kamboty,
omeo ny hitsiny ny ory sy ny malahelo.
4Vonjeo ny fadiranovana sy ny tsy manana,
afaho amin' ny tànan' ny ratsy fanahy izy.
5Tsy manam-pahaizana na hazavan-tsaina ireny,
fa mandeha amin' ny maizina;
mihorohoro ny fanambanin' ny tany rehetra.
6Hoy aho: andriamanitra hianareo,
zanaky ny Avo indrindra avokoa hianareo.
7Kanefa ho faty tahaka ny olona ihany hianareo;
ho lavo tahaka izay andriandahy na iza na iza.
8Mitsangàna, ry Andriamanitra ô, tsarao ny tany,
fa anao ny firenena rehetra. (Salamo 82.1-8, Ny Baiboly Masina)
Miresaka toy izao i Marti Steussy, ao amin’ ny Chalice Introduction to the Old Testament: “Ny andininy voalohany amin’ ny Salamo faha-82: "Elohim dia eo amin' ny fiangonan' ny Elohim; ary eo amin' ireo elohim no itsarany." Eto dia mifandray amin' ny matoanteny milaza tokana ny Elohim ary manondro an' Andriamanitra (tokana) mazava tsara, fa eo amin' ny andininy faha-6 amin' ny Salamo kosa, dia hoy Andriamanitra amin' ireo mpikambana hafa ao amin' ny filan-kevitra: "Ianareo dia elohim" ("andriamanitra ianareo"). Eto ny hoe elohim dia tsy maintsy midika hoe "andriamanitra maro".
I Mark Smith, izay niresaka an’ io Salamo io ihany, dia nilaza toy izao ao amin’ ny boky God in Translation: “Ity salamo ity dia mampiseho ny fisehoan’ ireo andriamanitra nivory tao amin’ ny fivoriamben' ny andriamanitra ... Elohim dia mijoro ao amin’ ny filankevitry ny El. Manambara fitsarana izy eo amin' ireo elohim:..."
Ao amin' ny Hulsean Lectures for..., i HM Stephenson dia niresaka momba ny tohan-kevitr' i Jesoa ao amin' ny Joany 10:34–36 momba ny Salamo faha-82. (Ho valin' ny fiampangana ny fitenenan-dratsy an' Andriamanitra dia namaly i Jesoa:) "Jesosy namaly azy hoe: Tsy voasoratra ao amin' ny lalànareo va hoe: Hoy Izaho: Andriamanitra ianareo? Raha ireny izay nanaovana izany tenin' Andriamanitra izany no natao hoe andriamanitra (ary ny Soratra Masina tsy azo foanana), moa Izay nohasinin' ny Ray ka nirahiny ho amin' izao tontolo izao va no ataonareo hoe: Miteny ratsy Ianao, satria hoy Izaho: Zanak' Andriamanitra Aho? – “Ankehitriny inona no herin’ ity teny nindramina ity: ‘Hoy aho: andriamanitra ianareo.’ Avy ao amin’ ny Salamon' i Asafa izany, izay manomboka amin' ny hoe: “Elohim dia eo amin' ny fiangonan' ny Tsitoha; ary eo amin' ireo Elohim no itsarany.”
Ny teny hebreo nadika hoe “zanaka” dia ben; ny milaza maro dia ny teny hoe bānim Ny teny hebreo hoe benei elohim (“zanak' Andriamanitra” na “zanak' ireo andriamanitra”) ao amin’ ny Genesisy 6:2 dia ampitahaina amin’ ny fampiasana ny hoe “zanak’ andriamanitra” (ogaritika: b’n il) zanak’i El amin’ ny fedrà ogaritika. Nilaza i Karel van der Toorn fa ny andriamanitra dia azo antsoina ny hoe bene elim, bene elyon, na bene elohim.
Ny Baiboly hebreo dia mampiasa anarana isan-karazany ho an' ny Andriamanitry ny Isiraely: Araka ny petra-kevitra ara-tahirin-kevitra, ireo fiovaovana ireo dia vokatry ny lahatsoratra sy fitantarana loharano samihafa izay mandrafitra ny Torah: Elohim no anaran' Andriamanitra ampiasaina ao amin' ny loharanon'ny Elôhista (E) sy ny Mpisorona (P), raha Yahweh kosa no anaran' Andriamanitra ampiasaina ao amin' ny loharano iahvista (J). Ny fitsikerana endrika dia milaza fa ny fahasamihafan' ny anarana dia mety ho vokatry ny fiaviana ara-jeôgrafia; ny loharano P sy E dia avy any avaratra ary J avy any atsimo. Mety misy hevitra teôlôjika, fa tsy nanambara ny anarany hoe Yahweh, talohan’ ny andron’ i Mosesy, na dia nasehon’ i Hans Heinrich Schmid fa nahafantatra ireo boky ara-paminaniana tamin’ ny taonjato faha-7 sy faha-8 tal. J.K. ny Iahvista.
Ny loharanon' ny Iahvista dia manolotra an' i Yahweh amin' ny fomban' ny olombelona (antrôpômôrfisma): ohatra, mandeha ao min' ny saha Edena mitady an' i Adama sy Eva. Ny loharanon' ny Elôhista dia matetika mampiseho an' i Elohim ho lavitra kokoa ary matetika mifandray amin' ny anjely, toy ny ao amin' ny fitantaran' ny Elôhista momba ny Tohatr' i Jakoba, izay misy tohatra mankany amin' ny rahona, misy anjely miakatra sy midina, miaraka amin' i Elohim eo an-tampony. Ao amin' ny fitantarana iahvista an' ilay tantara, i Yahweh dia mipetraka fotsiny eny amin’ ny lanitra, eo ambonin’ ny rahona tsy misy tohatra na anjely. Toy izany koa, ny loharano elôhista dia miitantara an' i Jakoba nitolona tamin' ny anjely.
Ny petra-kevitra ara-tahirin-kevitra, izay novolavolaina voalohany tamin' ny faramparan' ny taonjato faha-19 teo amin' ireo manam-pahaizana ara-Baiboly sy mpitsikera lahatsoratra, dia milaza fa ny ampahany iahvista ao amin' ny Torah dia noforonina tamin' ny taonjato faha-10-sy faha-9 tal. J.K., ary ny ampahany elôhista kosa tamin' ny taonjato faha-9-8. tal. J.K.,: izany hoe tamin’ ny vanim-potoana voalohan’ ny Fanjakan' i Jodà. Tsy eken' ny rehetra anefa izany satria ny fitsikeana ny fampandriana an-tsoratra taty aoriana dia toa mampiseho porofon' ny "fampandriana an-tsoratra elôhista" (taorian' ny sesitany) taty aoriana nandritra ny taonjato faha-5 tal. J.K. izay mahatonga azy ho sarotra indraindray ny hamaritana raha "elôhista" no niavian' ny andalana iray, na vokatry ny mpanonta lahatsoratra taty aoriana.
Ny olana apetraky ny endrika milaza maroHanova
Ny fiafaran-teny hoe -im ao amin' ny teny hoe Elohim izay ilazana ny fahamaroana amin' ny teny hebreo dia anaovan' ny mpahay fiteny fivoasana isankarazany.
Ny mpandika tenin' ny Septanta sy ny Volgata dia nandika ny Elohim amin' ny fampiasana anarana milaza tokana. Ohatra, ny Genesisy 1.1 hoe "Tamin' ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany" dia adika amin' ny teny latina hoe "In principio creavit Deus cælum et terram." ka ny hoe Deus dia anarana amin' ny endrika milaza tokana. Ny teôlôjia nahazatra hatramin' izay dia mihevitra fa io endrika milaza maro io, raha ny marina, dia milaza fihoaran-toetra (latina: pluralis excellentiæ) fa tsy ilazana ny fahamaroana an' isa.
Na dia izany aza dia hita ihany ny fahamaroana amin' ny toerana sasany ao amin' ny Baiboly: Gen. 1.26 ("Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ..."). Hita koa izany ao amin' ny Gen. 3.22 ("Ary hoy Iaveh Andriamanitra: Indro efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ny olombelona raha ny amin' ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy. ...").
Maro ireo petra-kevitra naroso hanazavana io endrika milaza maro io. Ny teôlôjia mahazatra hatramin' izay dia milaza fa tsy avy amin' ny teny hebreo amin' ny endrika milaza tokana hoe אֱל / ʾEl na hoe אֱלוֹהַּ / ʾEloah io teny hoe elohim io. Milaza Io teôlôjia io fa io endrika io dia endrika milaza maron' anarana tsy misy amin' ny endrika milaza tokana.
Tsy mitovy hevitra ny teôlôjiana ny amin' ny hevitra teôlôjikan' ny endrika milaza maron' ny anarana hoe Elohim.
Ny teôlôjia velarin' ny firehana evanjelika sasany sy ny Katôlika sasany dia manamarina ny fampiasana ny endrika milaza maron' ny anarana hoe Elohim amin' ny Trinite: Andriamanitra dia telo izay iray, dia ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Izany no fanamarinana entin' i Abélard tamin' ny taonjato faha-12, ao amin' ny boky nosoratany hoe Theologia summi boni .
Fivoasan' i Thomas RömerHanova
I Thomas Römer dia manazava io endrika milaza maro io amin' ny alalan' ny fahitana ny orimbato tranainy maneho sarin' olona telo: ny iray lehibe atao hoe El ary ny roa kely kokoa, izay toetra fisehoany, dia i Tsaddek ("ny fahamarinana") sy i Mispath ("ny fitandremana"). Izany fivoasana izany anefa dia tsy lasa lavitra.
Filazana ny fahambonianaHanova
Ny hoe Elohim dia ilazana vondron' olona satria ny filazà-marom-pahamboniana dia tsy manazava ny endriky ny teny hoe Elohim. Fitenenana vao noforonina tao Eorôpa taty aoriana (taonjato faha-9) io filazà-marom-boninahitra io. Naninteraka tao amin' ny fomban' ny Jiosy tandrefana izany fitenin' ny andriana eorôpeana izany izay nampiasaina koa tao amin' ny kolontsain' ny fivavahana tandrefana. Ny hoe "izahay" nampiasain' ny mpanjaka notokanan' ny Fiangonana tamin' izay, indrindra ny Fiangonana katôlika, dia midika hoe "izaho mpanjaka sy Andriamanitra". Noho izany dia tena ilazana zavatra maro tokoa ny hoe "izahay".
Ao amin' ny Olomasin' ny Andro FaranyHanova
Ao amin' ny Hetsiky ny Olomasin' ny Andro Farany sy ny môrmônisma, ny hoe Elohim dia manondro an' Andriamanitra Ray. Elohim no rain’ i Jesoa eo amin’ ny lafiny ara-batana sy ara-panahy, ary ny anarany talohan’ ny nahaterahany dia atao hoe Jehovah.
Ao amin' ny rafi-pinoana nohazonin' ireo fiangonana kristiana izay mifikitra amin' ny hetsika Olomasin' ny Andro Farany sy ny ankamaroan' ny antokom-pinoana Môrmôna, anisan' izany ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin'ny Andro Farany, ny teny hoe Andriamanitra dia manondro an' i Elohim (ilay Ray Mandrakizay), fa ny Andriamanitra kosa dia midika hoe filankevitry ny andriamanitra telo miavaka: Elohim (Andriamanitra Ray) sy Jehovah (ilay Zanak' Andriamanitra, Jesoa Kristy), ary ny Fanahy Masina, ao amin' ny fiheverana tsy trinitariana ny maha Andriamanitra. Ao amin’ ny Môrmôna, ireo olona telo ireo dia heverina ho olona misaraka ara-batana, na olona, ​​saingy miray amin’ ny sitrapo sy ny tanjona; io hevitra io dia tsy mitovy amin' ny fivavahana kristianina trinitariana. Noho izany, ny teny hoe Andriamanitra dia tsy mitovy amin' ny fomba ampiasana azy amin' ny kristianisma mahazatra. Io filazalazana momba an' Andriamanitra io dia maneho ny ôrtôdôksian' ny Fiangonan' ny Olomasin' ny Andro Farany, izay naorina tany am-piandohan' ny taonjato faha-19.
Ny Bokin' i Abrahama, soratra masina eken’ ny sampana sasany amin’ ny hetsika Olomasin’ ny Andro Farany, dia mirakitra fehezanteny iray ao amin’ ny toko voalohany ao amin’ ny Genesisy izay mandika mazava y hoe Elohim ho “ireo Andriamanitra” imbetsaka; Izany no hevitry ny apôstôly James E. Talmage mba hilazana ny "fahamaroan’ ny hatsarany na ny hamafiny, fa tsy ny isa miavaka".
Ao amin' ny raelismaHanova
Ny hetsika ara-pivavahana vaovao sy ny fivavahana UFO International Raëlian Movement, naorin' ny mpanao gazety frantsay Claude Vorilhon (izay nantsoina hoe "Raël") tamin' ny taona 1974, dia milaza fa ny teny hebreo hoe Elohim ao amin' ny Bokin' ny Genesisy dia manondro karazana vahiny avy any ivelan' ny tany.
↑ "Hitan' ny Tompo fa niolaka hijery izy; dia niantso azy Andriamanitra teo afovoan' ny zava-maniry milobolobo, nanao hoe: Ry Moizy! ry Moizy! Ka hoy ny navaliny: Inty aho." Eks 3:4
↑ eng "Thou shalt have no other gods before me." // fr "Tu n' auras pas d' autres dieux devant moi."
↑ 3,0 et 3,1 "Handalo mamaky ny tany Ejipta aho amin' io alina io, ka ny lahimatoa rehetra amin' ny tany Ejipta hovonoiko, hatramin' ny olona ka hatramin' ny biby, ary hisy fitsarana hoefaiko momba ny andriamanitr' i Ejipta rehetra: fa izaho no Iaveh." (Eks 12.12)
↑ 4,0 4,1 et 4,2 "Ary hoy ny mpanjaka taminy: Aza matahotra; fa inona no hitanao? Dia hoy ravehivavy tamin' i Saola: andriamanitra miakatra avy amin' ny tany no hitako." (1Sam 28.13)
↑ "Izy no hiteny amin' ny vahoaka hisolo anao; ho solom-bavanao izy, ary hianao kosa ho solon' Andriamanitra aminy." (Eks 4.16)
↑ "Fantatro ankehitriny fa lehibe noho ny andriamanitra rehetra Iaveh, fa nampiharihary ny halehibeny izy, raha nampahory an' Israely ny Ejipsiana." (Eks 12.12)
↑ "Ary raha nampifindrafindra ahy hiala tamin' ny tranon' ny raiko Andriamanitra, dia hoy izaho tamin' ny vadiko: Izao no soa hataonao amiko any amin' izay tany rehetra halehantsika dia lazao aho hoe: Anadahiko izy." (Gen 20.13)
↑ "Moa tsy mipetraka ho tompon' izay nomen' i Kamosy andriamanitrao anao ho fanananao va hianao, ary izahay moa tsy tokony hipetraka ho tompon' izay rehetra nomen' ny Tompo Andriamanitray anay ho fanananay?" (Mpits 11.24)
↑ "1 Ary Ahazia nianjera avy teo amin' ny makarakara teo amin' ny efi-trano ambony tao Samaria ka narary; dia naniraka olona izy ka nanao taminy hoe: Mandehana, anontanio amin' i Bala-zeboba, andriamanitr' i Ekrona, na ho sitrana ihany aho amin' ity aretiko ity, na tsia. 2 Ary Ilay Anjelin' i Jehovah niteny tamin' i Elia Tisbira hoe: Miaingà, miakara hihaona amin' ny iraky ny mpanjakan' i Samaria, ka manaova aminy hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Moa ataonareo fa tsy misy Andriamanitra eo amin' ny Isiraely va, no mandeha hanontany amin' i Bala-zeboba, andriamanitr' i Ekrona, ianareo?" (2Mpanj 1.2-3)
↑ "fa nanaraka an' i Astarte andriamani-bavin' ny Sidoniana Salomona, sy an' i Melkoma, fahavetavetan' ny Amonita." (1Mpanj 11.5)
↑ "satria efa nahafoy Ahy izy ka niankohoka teo anatrehan' i Astarta, andriamani-bavin' ny Sidoniana, sy Kemosy andriamanitr' i Moaba, ary Milkoma, andriamanitry ny taranak' i Amona, fa tsy nandeha tamin' ny lalako hanao izay mahitsy eo imasoko sy hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko tahaka an' i Davida rainy." (1Mpanj 11.33)
↑ "Amin' izany andro izany, Iaveh hanangana manda manodidina ny mponina ao Jerosalema, ary izay mangozohozo eo amin' izy ireo, dia ho tahaka an' i Davida amin' izany andro izany, ary ny taranak' i Davida ho tahaka an' Andriamanitra, dia ho tahaka ilay anjelin' ny Tompo, eo anoloan' izy ireo." (Zak 12.8)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Elohim&oldid=1043618"
Dernière modification le 8 Febroary 2022, à 05:25
Voaova farany tamin'ny 8 Febroary 2022 amin'ny 05:25 ity pejy ity.